yakatanga 1 zuva rapfuura
Mari yakaiswa mari: $250
Profit yakaitwa: $5,874
yakatanga mazuva 2 apfuura
Mari yakaiswa mari: $500
Profit yakaitwa: $23,411
yakatanga mazuva 3 apfuura
Profit yakaitwa: $14,622
Profit yakaitwa: $5,219
Profit yakaitwa: $10,480
Profit yakaitwa: $11,734
Nhanho nhanho mirairo
Vhura account ne CryptoSoftware
Ita dhipoziti muaccount yako yekutengesa uye utange
Tevera zviratidzo kubva pasoftware nekutengesa
Nyaya chaidzo dzevashandisi vedu
Kutaura chokwadi, ndingadai ndisina kumbotarisira kuti zviri nyore kutanga kutengeserana ne CryptoSoftware. Ndakaisa $ 250 yangu uye mushure memazuva maviri, ndisina kana kuzara maawa makumi mana nemasere, ndine madhora anodarika zviuru mazana manomwe paakaundi yangu. Chishamiso!
Ndatenda nekundipa uyu mukana. Ndiri kufara kuti ndakatanga ne CryptoSoftware kwakutanga. Ini ndatove nekatatu mari yangu mushure meawa rimwe chete. Uye ikozvino, rinenge zuva rimwe chete gare gare, ndatoita madhora zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu nemana. Zvese zvandinogona kutaura ndi… ndiri kufara !!!
yakatanga vhiki rapfuura
Mushure mekugadzira $ 4,122 muzuva rangu rekutanga, handina kuzvitenda. Asi mushure mekunge ndaita imwe zviuru zvishanu zuva raitevera uye ingangoita makumi matatu ezviuru muvhiki, ndinoziva kuti ichokwadi. Kana iwe uchine mukana wekusaina, tora uye hauzombozvidemba!
Kuvhara kubva kunhau
$ 154 Bhirioni: Bitcoin Mutengo Rally Inotakura Crypto-misika kuNew Record
Bitcoin spikes kune rekodhi yakakwira pamusoro pe $ 4,700
Bitcoin Inotyora $ 5,000 muChizvino Mutengo Frenzy
Pedzisa kunyoresa kwako uye tanga izvozvi